Kumira Wiricheya Ma prototypes & Pfungwa | KarmanHealthcare.com
Kuita Kumira Mawiricheya inokwanisika yaive yaikurudzira yaKarman yekugadzira nekugadzira yedu inotungamira XO nhevedzano yekusimuka Mawiricheya. Nekupaza kwehunyanzvi uye kufambira mberi mune zvese zvekurapa uye zvemagetsi matekinoroji, Karman's R&D department inopokana neiyo indasitiri kuti isangogamuchira chete, asi itungamire izvi nenzira inoshandura nzira iyo vanhu vanobatsirwa nayo neAssed Technology. Tinoda simba remagetsi risingaperi pamagetsi edu emagetsi wiricheya, saka heino mhinduro mhinduro.
Chimiro chitsva wiricheya prototype inoenderana nePV maseru ekushandura mwenje wezuva kuita magetsi. Kusiyana nesimba remagetsi anopisa anoshandura simba rezuva kuita kupisa nekuda kwemba, zvinangwa zveindasitiri kana kushandurwa kuita magetsi, masero ePV anoshandura mwenje wezuva kuita magetsi. Kana mwenje wezuva (mafotoni) akarova masero ePV, anonakidza maerekitironi uye anoatendera kuti ayerere, achigadzira magetsi emagetsi. PV maseru akagadzirwa nesemiconductor zvinhu senge silicon uye alloys e indium, gallium uye nitrogen. Silicon ndiyo inonyanya kushandiswa zvinhu uye ine mwero weunyanzvi we15-20%.
Ndege Zvinhu Zveinjiniya Muviri Chimiro
Kutasva munzvimbo yekupedzisira isingaperi yekugadzira simba kubva kuzuva ingori kutanga. Sezvo timu yeR & D ichigadzira furemu nyowani yakatenderedza simbi yakasimbiswa, (T-6 Ndege giredhi aruminiyamu), yedu AME tekinoroji inoshandisa dandemutande rezvakabatana zvesimba zvinhu kugovera simba rekuparara zvakaenzana mukati mepamberi kwe wiricheya. Kugadzira izvi a lightweight dhizaini yakasimba pamwe nehunyanzvi hwekumisa uye zvivakwa zvichisunda KD / KS Delta kuyedza uye X-BAR / R-BAR dhata inotyaira kuvimbika kwedu uye kuderera kwezwi muchimiro chechigaro.
Dhizaini dhizaini yemotokari uye matekiniki ari pamudzi weedu Akamira Furemu dhizaini. Kugamuchira matekinoroji aya zvinoratidza kuti hapana kumwe kumira wiricheya ichauya padyo nekuvimbika, nyaradzo uye chengetedzo yakapihwa mukugadzirwa kwedu.
Simba pazvinenge zvichidikanwa; iyo Plus S-Sport Sisitimu inowedzera iyo wiricheyaKuita. Vashandisi vanogona kushandisa iyo S-Sport bhatani uye iyo mbiri clutch EV inotungamirwa yekusimudzira yekumhanya. Iine pamusoro pe98% yetoriki inowanikwa kuburikidza neyekutanga 5% yekubata, mukana weedu epamusoro magiredhi emota akafuridzirwa naBosch naRemington, zvinowanikwa musingaiti. Kunyangwe uchiita pasipoti, uchimhanyira kuenda kune imwe nzvimbo, kana kungoita zvekunakidzwa, tinoda kuisa simba mumaoko ako.
Yakabatanidzwa Karman Motor System KMS
Karman's KMS system iri yakapusa uye compact dhizaini. Panzvimbo pekuve nenzvimbo dzakawanda dzeyuniti inodzora, bhatiri, uye trans-axle senge rakajairika simba Mawiricheya, iyo KMS system inosanganisa iwo matatu mashandiro kuita one akareruka, akakodzera dhizaini ayo anobvisa kusasana, uye zvisina basa uremu.
Nekuda kweiyo PV system uye simba rekuwedzera rinowanikwa, KMS system inobvumidza mamwe ma plug-ins akadai seUSP, Apple Interface, uye nemamwe magetsi akananga kuona kuti zvisikwa zvezuva nezuva zvinyaradzo hazvingogumira kunzvimbo yako yenzvimbo. Karman anotenda kuti yako kufamba kuwana uye kugona kunofanirwa kutungamirwa sechero ipi inotungamira zvigadzirwa zve tech zviripo pamusika nhasi uye zvaunogona zuva nezuva.
Zvimire Zvakamira Mawiricheya
XO-505 Yakamira Wiricheya (PROTOTYPE)
akamira Mawiricheya Parizvino Inowanikwa